Farmaajo oo dalka dib ugu laabtay kadib Shirkii Brussels [Sawirro]
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay, kaddib shirkii miro dhalka ahaa ee Madasha Iskaashiga Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa Brussels waxa uu la kulmay madax ka socotay Qaramada Midoobey, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya, oo uu kala hadlay xoojinta wada shaqeynta iyo taageerada ay siiyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hadal-jeedintiisa ugu dulmaray qurbajoogta Soomaaliyeed ee Qaaradda Yurub guulihii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka gaartay xoojinta wadashaqeynta Hay’adaha Dowladda Federaalka ah, kordhinta ilaha dakhliga, xaqiijinta kalsoonida beesha caalamka, dib-u-soo-celinta maamulka hawada iyo maxaabiistii ku dhibaataysnayd xabsiyada dalalka shisheeye oo waddanka dib loogu soo celiyey.
Wararkii ugu dambeeyay Shirka Brussels [TOOS U DAAWO]
Soomaliya 17.07.2018. 16:55
Shirkana ayaa waxaa dhinaca kale hareeyay maalintii shalay khilaafka u dhaxeeya Madaxda...
Dowladda Belgium oo Danjire cusub soo dirtay Soomaaliya [Sawirro]
War Saxaafaded 12.06.2018. 20:41
Farmaajo oo dalacsiiyay Saraakiil Ciidan [Maxay ku muteysteen?]
War Saxaafaded 04.07.2018. 15:37
Sarkaal ku dhintay dagaal Ciidamo kawa tirsan DFS ku dhexmaray Muqdisho
Soomaliya 03.03.2018. 13:27
CC Shakuur: Villa Somaliya waa halka laga abaabulo Dilalka qorsheysan
Soomaliya 03.01.2018. 20:03
Maxaa shaqada looga joojiyey Taliyihii Ciidamada Villa Soomaaliya?
Soomaliya 05.04.2018. 22:56